31 “Ndakaita sungano nemaziso angu.+Saka ndingaramba sei ndakatarira mhandara?+ 2 Mugove unobva kuna Mwari ari kumusoro chii,+Kana kuti nhaka inobva kuna Wemasimbaose kumusoro chii? 3 Hakuna here njodzi inouya kune munhu anoita zvakaipa,+Uye nhamo inouya kune vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza? 4 Ko iye haaoni here nzira dzangu+Nokuverenga nhanho dzangu dzose? 5 Kana ndakafamba nevanhu venhema,+Uye kana tsoka yangu ichimhanyira kuunyengeri,+ 6 Iye achandiyera pachikero chakarurama+Uye Mwari achaziva kuvimbika kwangu.+ 7 Kana nhanho dzangu dzikatsauka munzira,+Kana kuti mwoyo wangu wakatevera maziso angu,+Kana kuti chero mhosva ipi zvayo yakanamatira muzvanza zvangu,+ 8 Regai ndidyare mbeu asi mumwe munhuwo zvake adye,+Uye vazukuru vangu ngavadzurwe. 9 Kana mwoyo wangu wakanyengerwa kuti ude mumwe mukadzi,+Ndikaramba ndakavandira+ pasuo reshamwari yangu, 10 Mudzimai wangu ngaakuyire mumwe murume,Uye vamwe varume ngavapfugame pamusoro pake.+ 11 Nokuti kuita izvozvo kwaizova kusazvibata,Uye kwaizova kukanganisa kunofanira kutarisirwa nevatongi.+ 12 Nokuti izvozvo zvaizova moto unopisa kusvikira waparadza,+Uye waizodzika midzi pakati pezvibereko zvangu zvose. 13 Kana ndairamba kururamisira mushandirume wanguKana kuti mushandikadzi wangu pamhosva yavo neni, 14 Saka ndingaiteiko Mwari paanosimuka?Ndingamupindureiko paanoita kuti ndizvidavirire?+ 15 Iye akandiita mudumbu haasi iye akamuitawo here,+Haasi iye Mumwe chete akatiumba muchibereko here? 16 Kana ndainyima vakaderera zvavanofarira,+Uye ndainetesa maziso echirikadzi,+ 17 Kana ndaidya chimedu changu ndiri ndoga,Nherera isingachidyiwo+ 18 (Nokuti kubvira ndichiri muduku iyo yakakura neni sokunge kuti yaiva nababa,Ndakaramba ndichitungamirira chirikadzi kubvira mudumbu raamai vangu); 19 Kana ndaiona mumwe munhu achiparara nokuda kwokushayiwa nguo,+Kana kuti ndaiona kuti murombo haana chokufuka; 20 Kana chiuno chake chisina kundikomborera,+Kana kuti asina kudziyirwa nemvere dzakaveurwa+ dzemakondohwe angu maduku; 21 Kana ndaivheyesera nherera ruoko rwangu,+Pandaiona kuti ndaifanira kubatsira pagedhi,+ 22 Bendekete rangu ngariwe richibva papfudzi raro,Uye ruoko rwangu ngarutyoke nepapfupa rarwo repamusoro. 23 Nokuti njodzi inobva kuna Mwari yaindityisa,Uye handina kukwanisa kuita chinhu nokuda kwokukudzwa kwake.+ 24 Kana ndakavimba nendarama,Kana kuti ndakati kundarama, ‘Ndinovimba newe!’+ 25 Kana ndaifara nokuti pfuma yangu yaiva zhinji,+Uye nokuti ruoko rwangu rwakanga rwawana zvinhu zvizhinji;+ 26 Kana ndaiona chiedza pachaipenya,Kana kuti mwedzi unokosha uchifamba,+ 27 Uye mwoyo wangu wakatanga kunyengerwa pakavanda+Ruoko rwangu rukatsvoda muromo wangu, 28 Izvozvowo zvaizova kukanganisa kunoda kutarisirwa nevatongi,Nokuti ndinenge ndaramba Mwari wechokwadi ari kumusoro. 29 Kana ndaifarira kutsakatika kwomunhu anondivenga kwazvo,+Kana ndaifara kwazvo kuti zvakaipa zvamuwana— 30 Handina kubvumira mukanwa mangu kuti mutadzeNokukumbira kuti mweya wake utukwe.+ 31 Kana vanhu vomutende rangu vasina kuti,‘Ndiani angati pane munhu asina kuguta nezvokudya zvake?’+— 32 Hapana mutorwa airara panze;+Ndairamba ndakavhurira vaya vaifamba munzira masuo angu. 33 Kana ndakafukidza kudarika kwangu somunhu wepanyika+Nokuvanza kukanganisa kwangu muhomwe yehembe yangu— 34 Nokuti ndaizovhunduka paboka guru revanhu,Kana kuti kuzvidza kwemhuri kwaizondivhundutsaUye ndaizoramba ndakanyarara, ndaisazobuda pasuo. 35 Haiwa, kudai ndaiva nomumwe munhu anonditeerera,+Kudai Wemasimbaose aindipindura zvinoenderana norunyoro rwangu!+Kana kuti kudai munhu ane mhosva neni akanga anyora rugwaro! 36 Chokwadi ndaizorutakura papfudzi rangu;Ndaizorusungirira pandiri sekorona yakanaka. 37 Ndaizomuudza kuwanda kwenhanho dzangu;+Ndaizoenda kwaari somutungamiriri. 38 Kana munda wangu ukachema kwandiri kuti ubatsirwe,Uye miforo yawo ikasvimha misodzi pamwe chete; 39 Kana ndichinge ndadya zvibereko zvawo ndisina kubhadhara mari,+Uye ndaita kuti mweya yevaridzi vawo ifemereke,+ 40 Utumbambeva ngahumere panzvimbo pegorosi,+Sora rinonhuhwa ngarimere panzvimbo pebhari.” Mashoko aJobho apera.